လူသားအားလုံးအတွက်: ပိုးမင်းသား နှင့် သိုင်းဝိညာဉ် (အပိုင်း ၁) တရုတ်သိုင်းကား
ကျွန်တော် ဝဘ်ဆိုဒ်လေးမှာ အရေးကြီးတာတွေ ဦးစားပေး တင်နေရတာနဲ့ ဗီဒီယို ဇတ်ကားတွေ မတင်ပေးရတာ ကြာနေပါပြီ ... အခု အခန်းဆက် တရုတ်သိုင်းကားတွေ တင်ပေးပါ့မယ်။ ပိုးမင်းသား နှင့် သိုင်းဝိညာဉ် (အပိုင်း ၁) တရုတ်သိုင်းကား အစီအစဉ်ကို တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း ၅၆ ပိုင်းရှိသော အခန်းဆက် သိုင်းကားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် အားတဲ့အချိန် အခန်း ဆက်တင် ပေးသွားပါမည်။ လောလောဆယ် အပိုင်း(၈) အထိတင်ပေး ထားပါတယ်။ https://www.youtube.com/ကို ဝင်ရောက်ပြီး နေဇော်လင်း လို့မြန်မာလို ရိုက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by နေဇော် လင်း at 10:36 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
My web blog; tissot
country and language and what specific elements you
want to install. A whole host of image enhancing features is provided as standard which
allows users to manipulate and edit images and videos, including
autofocus, touch-focus, face & smile detection as well as geo-tagging
which functions based on GPS. "Many eyes will likely be on them to determine if they'll pull the rabbit out with the hat," Enderle mentioned.
Review my webpage; galaxy tab
Dοes your blog hаvеaсontaсt page?
I'm havingatough time locating it but, I'd like tο send you
Look into my web site: locksmiths solihull
ဆက်တင်ပေးပါအုံးအကိုရေ ...စပ်တငတ်ငတ် ဖြစ်နေလို့
to it, most noticeable when you're looking at light grey areas. The HTC Evo 3D was always going to beagreat phone but in order to be successful it needs suitable software to back it up. Chromebooks, made their debut in 2011 with some good promise.
I found the car atatruck dealership for $7000 dollars. This keeps
Thаnks for ѕhаring suсh а fаstidiouѕ οpiniοn, pіeсe of writing is fastidіouѕ, thats ωhy i
have гeaԁ іt entiгely
Mу blog; makes boobs bigger naturally